IiNdumiso Chapter127 1 Ingoma yezinyuko. KaSolomon. Ukuba akayakhi uYehova indlu, Bafumana besaphuka yiyo abakhi bayo. Ukuba umzi akawugcini uYehova, Ufumana ephaphama owugcinayo. 2 Nifumana nivuka kusasa, Nihlale nisebenza kude kube sebusuku, Nikudla ukudla kokubulaleka; Uyipha intanda yakhe, ilele ubuthongo. 3 Uyabona, ilifa likaYehova ngoonyana, Umvuzo sisiqhamo sesizalo. 4 Njengeentolo esandleni segorha, Banjalo oonyana bobutsha. 5 Hayi, uyolo lomfo ozalise umphongolo wakhe ngabo! Abayi kudana, Xa bathetha neentshaba esangweni. [ Prev ]